မေးခွန်း-အဖြေ သားဆက်ခြားတားဆေးထည့်ပစ္စည်းခြင်းနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရတတ်သော - intouchmedicare
Last updated: 2022-05-06 | 1409 ကြည့်ရှုခြင်း |
ကိုယ်၀န်တားခြင်းသည်ယာယီတားခြင်းမျိုးသာဖြစ်သောကြောင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ထိုးဆေးဖြင့်၄င်း၊တားဆေးကွင်းထည့်ခြင်းဖြင့်၄င်း၊ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဖြင့်၄င်း၊ကပ်ဆေးသုံးခြင်းဖြင့်၄င်း(သို့)သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၄င်း ယခုအခါတွင်ခေတ်မီ၍အသုံးများသောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။သင်အနေနှင့်သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်လိုပါသော်လည်းသံသယဖြစ်တတ်သောအချက်များကြောင့်ဤနည်းလမ်းဖြင့်ကိုယ်၀န်တားခြင်းသည်ကောင်း၏မကောင်း၏ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲပဲဖြစ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့မှသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရတတ်သော မေးခွန်းနှင့်အဖြေအချက်အလက်များအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက် မှာကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းဆိုသည်မှာသင့်အား လုံခြုံစိတ်ချရသောကိုယ်၀န်တားခြင်းအတွက်ကူညီရန်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ထိရောက်မှု့မြင့်မားသောကာကွယ်မှု့တစ်ခုဖြစ့်၍ရာသီလာချိန်အတွင်းနာကျင်ကိုက်ခဲမှု့ကိုလည်းလျော့ကျသည်အပြင် နောက်တစ်ခုမှာ 3-5 နှစ်အထိလည်းကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ဤနည်းလမ်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းသည် ကွန်ဒုံးသုံး၍ဖြစ်စေ၊သောက်ဆေးသုံး၍ဖြစ်စေ၊အရေးပေါ်တားဆေးသုံးခြင်းဖြင့်တားသည်ဖြစ်စေ အခြားသောတားဆေးများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်း၏ဆိုးကျိုးများမှာအခြားသောတားဆေးမျာသုံးသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။၄င်းမှာ ရင်သားတင်းနာခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊၀က်ခြံ၊တင်းတိတ်ထွက်ခြင်း၊စိတ်ခံစားချက်များပြောင်းလဲခြင်း၊စိတ်ကျခြင်းနှင့် တားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းပြီးပထမအကြိမ်၌ရာသီလာသကဲ့သို့သွေးအနည်းငယ်ထွက်ပြီးနောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပျောက်သွား၍ဉပမာ အချို့တွင်ရာသီလာရာ၌သွေးပို၍များလာခြင်း၊ပုံမှန်ထက်ပိုစိတ်လာခြင်း၊နောက်ကျခြင်း၊စောခြင်း(သို့)ရာသီလုံး၀မလာတော့ခြင်းကဲ့သို့သောတစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး ဖြစ်ပုံကွဲပြားခြားနားမှု့ရှိပါသည်။
2. သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းပြီးနောက် ၀နိုင်လား
အချို့လူနည်းစုကိုယ်အလေးချိန်တက်နိုင်ပြီး အတိအကျဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များမရှိသေးပဲတွေ့ရနိုင်ချေနည်းပါသည်။တက်လာသောကိုယ်အလေးချိန်မှာတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်ဟုတ်/မဟုတ်နှင့် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၄င်းတို့ အမျာစုသည်းမသင့်လျော်သောအစားအစာများစားသုံးခြင်းများကြောင့်ဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါသည်။အကယ်၍ မိမိကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းသည် အစားစားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဟုခံစားမိပါက ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသညိ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားအကြောင်းအရာများသော ဉပမာ သွိုက်ရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
3. သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းမှု့အတွက် တားဆီးချက်များ
ကိုယ်၀န်ရှိသည်ဟုသံသယရှိနေသူများသည်သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းမှု့အားမပြုလုပ်သင့်ပါ။ (သို့) ရာသီသွေးပုံမှန်မပေါ်သူများ၊ရင်သားကင်ဆာကဲ့သို့သောမျိုးပွားနိုင်သောကင်ဆာရောဂါရှိသူများ အထူးသဖြင့်ရောဂါအခံရှိသူများသည် ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသာလျှင်သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းမှု့အားပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
4. ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းအချိန်မမှန်ပါကမည့်သည့်အခါ၌သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့် သွင်းရမည်လဲ
အကယ်၍ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းအချိန်မမှန်ပါက(သို့)ရာသီလာချိန်ထိမစောင့်လိုပါကသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းရန်အတွက်ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍အစီအစဉ်ချနိုင်ပါသည်။သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းပြီးနောက်မှသာ အခြားတားနည်များအား7ရက်ဆက်၍သုံးပေးခြင်းဖြင့် တားဆေးပစ္စည်း၏ဆေးအာနိသင်ထိရောက်မှု့အားလည်ပတ်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
5. ရာသီလာချိန်၌ သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းလို့ရပါသလား
ပုံမှန်အားဖြင့်တားဆေးပစ္စည်း၏ဆေးအာနိသင်ထိရောက်မှု့မြင့်မားစေရန်အတွက် သင့်တော်သောသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းရမည့်အချိန်သည် ရာသီလာချိန် 1-5 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုအတွက်ကြောင့်ရာသီလာချိန် 1-5 ရက်အတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းလို့ရပါသည်။
6. သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းနောက် လိင်ဆက်ဆံလို့ရနိုင်ပါသလား
ရာသီလာချိန်ပထမ5ရက်အတွင်းသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းပြီးနောက်တွင် လိင်ဆက်ဆံလို့ရနိုင်ပါသည်။သို့ပေမဲ့လည်းရာသီလာချိန်တားဆေးပစ္စည်းအားအခြားနေ့များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့လျှင်လည်း အလိုရှိသလိုလိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါသညိ။သို့သော် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့အစရှိသောအခြားတားနည်းများအားတစ်ချိန်တည်း၌အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိုယ်၀န်တားရပါမည်။
အများစုနောက်ဆုံမေးတတ်သောမေးခွန်းမှာသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းသည်းထက်မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းမျှကိုယ်၀န်တားနိုင်ပါမည်နည််းဟူသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းသည်အခြားသောတားနည်းများထက် ထိရောက်မှု့ပိုမိုမြင့်မားသောနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်၀န်ရနိုင်သည့်အခွင့်အရေး 0.05% ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိပါသည်။အခြားသောတားနည်းများသည် တားနေသည့်ကာလအတွင်း တားဆေးကွင်းထည့်၍ကာကွယ်ခြင်းသည် 0.2% ထိုးဆေးသုံး၍ကာကွယ်ခြင်းသည် 0.2% ဆေးလုံးသောက်၍ကာကွယ်ခြင်းသည် 0.3% ကွန်ဒုံးသုံး၍ကာကွယ်ခြင်းသည် 2% အရေးပေါ်ဆေးသောက်၍ကာကွယ်ခြင်းသည် 15-20% နှင့် ပြင်ပသုတ်လွှတ်မှု့ 27% တို့ဖြစ်ပါသည်။
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းအားထည့်သွင်းသည့်နေရာသည် ဆေးပိုက်အားဂျိုင်းနှင့်တံတောင်ဆစ်အကြားရှိလက်မောင်းရင်းအတွင်းပိုင်း၌ ဦးစွာထုံဆေးထိုးပြီးနောက် ပြွန်6လုံးအားပန်ကာပုံသဏ္ဍာန်အသုံးပြု၍ဆေးပိုက်အားအရေပြားအတွင်းသို့မြှုပ်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒဏ်ရာသည်သေးငယ်သောကြာင့် ချုပ်ရန်မလိုအပ်ပဲ ပလာစတာအသေးလေးနှင့်ပိတ်ပေးရုံဖြင့် 3-5 ရက်အတွင်းပုံမှန်အတိုင်းပျောက်ကင်းစေပါသည်။ထည့်သွင်းပြီးနောက်7ရက်ရေမထိပါစေနှင့်။7ရက်ပြည့်ပြီးသောအခါ ဒဏ်ရာအားပြန်ကြည့်ရန်အတွက် ထပ်ချိန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု့ရယူပြီးနောက် 3-5 ရက်ထိဒဏ်ရာအားပိတ်ထားပေးရန်နှင့်ဒဏ်ရာအားရေမထိသင့်ပါ။
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းပြီး7ရက်အကြာတွင်မူမမှန်မှု့အားလာရောက်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
မူမမှန်သည့် ရာသီသွေးဆင်းခြင်းလက္ခဏာများ ဥပမာ သွေးတစ်ပျစ်ပျစ်အနည်းကျဥ်းစီဆင်းခြင်း ကဲ့သို့သောရာသီမမှန်သောလက္ခဏာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောလက္ခဏာများ ဥပမာ ရာသီမလာတော့ခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သောလက္ခဏာများ၊ဒဏ်ရာ၌သွေးထွက်ခြင်း (သို့) ဝါကျင့်ကျင့်အရည်များ (သို့) ပြည်တည်ခြင်း၊နီမြန်း၍ရောင်ရမ်းခြင်းများ ရှိပါကဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းပြသသင့်ပါသည်။
အထွေထွေကျန်းမာရေးဆေးစစ်သင့်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဆဲလ်များအား5နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အနည်းဆုံးတစ်လ 1 ကြိမ် ရင်သားအားကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ခြင်း
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်ခြင်းနည်းလမ်းမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူသည့်အပြင်ထိုးဆေး (သို့) သောက်ဆေးသုံး၍ကိုယ်ဝန်တားနည်းကြောင့်ဆေးသောက်ရန်မေ့မည့်ကိုလည်းစိတ်မပူရပါ။
သန္ဓေတားဆေးအား 3-5 နှစ်အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြင့်တားနိုင်ပါသည်၊၊
ဟော်မုန်းပရိုဂျက်စထိုရိုဂျင်အသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်များဖြစ်သော ဥပမာ သားအိမ်အပြင်၌သန္ဓေတည် ခြင်းအားကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သောသားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ကျစေခြင်းနှင့်ရာသီလာချိန် ကိုက်ခဲမှု့ကိုလည်းလျှော့ချပေးပါသည်။
မျိုးပွားမှု့အားကောင်းသောအခြေအနောက်ပိုင်း၌သန္ဓေတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီးနောက် ပုံမှန်အခြေအနေသို့လျင်မြန်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ထွက်ရှိလာသောဟော်မုန်းပမာဏအ နည်းငယ်ဖြင့်သာဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစုကျန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဆေးရပ်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်ပုံမှန်အတိုင်းကလေးယူနိုင်ပါသည်။
11. သန္ဓေတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းသုံးခြင်းဖြင့်သန္ဓေတားခြင်းသည် တင်းတိတ်၊မျက်နှာမွဲခြောက် ခြင်း၊ခေါင်းမူးခြင်းအမှန်တစ်ကယ်ရှိခြင်း (သို့) မရှိ
မမှန်ပါ။သန္ဓေတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းသုံးခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အားမဝစေခြင်း (သို့) ပိန်ခြင်းနှင့် တင်းတိတ်မဖြစ်စေခြင်း (သို့) မျက်နှာမဲစေခြင်း၊ခေါင်းမူးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်သန္ဓေတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မဆိုင်နိုင်ပါ။ သို့ပေမဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကြောင်းအရင်းအား သေချာတိကျစွာရှာဖွေသင့်ပါသည်။
ဤမေးခွန်းများသည် အမျိုးသမီးအများစုမေးတတ်ပြီး အမြဲတစေသံသယရှိလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖြစ်ပါသည်။သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါသည်။ဤမေးခွန်းများအပြင်ထပ်မံသိရှိလိုပါက အိမ်နှင့်နီးသောမည်သည့်ဆေးခန်းဌာနခွဲတွင်မဆို သွားရောက်၍၀န်ဆောင်မှု့ရယူနိုင်ပါသည်။ မိမိနှင့်နီးသော Intouch Medicare ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းအား Google တွင်ရှာခြင်းဖြင့် (သို့) (Website)၀က်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်ရန်လမ်းကြောင်းများမှလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အားကိုယ်၀န်တားခြင်းစီစဉ်ရန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်၍အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သောအထူးကုဆရာ၀န်များရှိပါသည်။
คำถามที่พบบ่อย การฝังยาคุมกำเนิด မကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်း သန္ဓေတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်း